Pokémon Go - Androidsis | Gam akporosis
Pokémon GO bụ egwuregwu nke Niantic mepụtara ma gụọ otu sagas ndị ama ama n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Egwuregwu a, nke na-agwakọta eziokwu dị elu na arụmọrụ a na-ahụkarị nke egwuregwu Pokémon, bụ otu n'ime ihe kachasị emetụta n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ahịa egwuregwu gam akporo. Ọtụtụ nde ndị ọrụ na-egwu ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ Pokémon GO ma chọọ ịma ihe ọ bụla na-eme na egwuregwu ahụ, ị ​​nwere ike ime ya na otu a. Ga-ahụkwa aghụghọ na aro iji nwee ike igwu egwu nke ọma ma si otú ahụ nweta pokémons niile dị na ya.
Otu esi egwu Pokémon GO na-ahapụghị ụlọ
Pokémon GO bụ otu egwuregwu kachasị ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya na gam akporo na iOS. Na mgbakwunye, ọ bụ…
por Ụlọ Ignatius eme Ọnwa 10 .
Pokémon GO agaghị enwe nkwado na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka site na Ọktọba
por Onyeka Onwenu eme 2 afọ .
Niantic nyere bọmbụ ahụ na mwepụta nke Pokémon GO, otu n'ime egwuregwu ndị wetaworo ọtụtụ uru, ...
Pokémon GO, Niantic Games na-atụ aro ndị ọrụ ya ka ha ghara ịhapụ ụlọ ha na iche iche
Pokémon GO bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ebe ọ bụ na mbido ya na 2016 site na Niantic Games, onye nrụpụta ama ama na onye okike ...
Pokémon ruru ijeri ego 3.000 kemgbe mmalite ya na 2016
por Ụlọ Ignatius eme 3 afọ .
Pokémon GO kụrụ n'ahịa n'oge okpomọkụ nke 2016 ma ghọọ ngwa ngwa ngwa ngwa ...
Pokémon GO ga-ahazi ihe omume pụrụ iche na ịnweta ụgwọ
por Edere Ferreno eme 3 afọ .
Pokémon GO abanyela na akụkọ a n'izu ndị a maka mmachibido nke ndị ọrụ nwere ekwentị Xiaomi tara ahụhụ. Ọ bụ ezie…
Machibidoro gị iwu Pokémon GO maka inwe Xiaomi? Ka weghachite akaụntụ gị
por Nerea Pereira eme 3 afọ .
Fewbọchị ole na ole gara aga, esemokwu ahụ wuru na egwuregwu Niantic a ma ama. Ihe kpatara ya? Ọtụtụ ndị egwuregwu Pokémon GO bụ ...
Pokémon GO na-agba ndị ọrụ Xiaomi n'egwuregwu
Pokémon GO ka bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na gam akporo na iOS n'agbanyeghị oge. Ihe…
Pokémon GO na-ewepụta ego na gam akporo karịa na iOS
Pokémon GO bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke a bụ nnukwu ihe ịga nke ọma maka ...
Pokémon GO ga-akwụsị iji Android 4 KitKat kwụsị ọrụ na ọnụ ya
Mgbe Pokémon GO gara ahịa 3 afọ gara aga, ọ ghọrọ mgbanwe na ụwa nke egwuregwu vidio ...
Pokémon GO ga-ahazi izu Adventure ọzọ
Pokémon GO bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ebe ọ gaferela 1.000 nde ...